Ngaba Ukuthula Kusoloko Kuligolide? - Khetha Uphawu
Ngaba Ukuthula Kusoloko Kuligolide?
Njengakuzo zonke izinto IMercury , siza kubona ukuba kukho iingcamango ezimbini ezifanayo ngendlela efanelekileyo yokunxibelelana nabanye abantu. Omnye wabo uya kucebisa ukuba kufuneka sikhululeke ukuthetha ingqondo yethu ngayo nantoni na, nangawuphi na umzuzu, ngokukhululeka kokuzenzekela ngokubaleka emqaleni wethu chakra. Yonke into ethethiweyo iya kuthi, ekugqibeleni, icoce ihlabathi lethu kwaye ikhokelele kuqhagamshelo olungcono lwentliziyo nengqondo. Enye ingcamango icebisa ukuba simele sithi cwaka kangangoko sinako, sithethe kancinane kwaye siphulaphule kakhulu, yaye oku kusenokuba yinyaniso ngaphandle kwenxalenye enzima yesithintelo esenokungabi yimfuneko ngendlela engqongqo ngolo hlobo. Ukuthula kuya kunceda, njengoko zonke izinto ezixhasa indima kaSaturn ebomini bethu, ukwakha ingqiqo yokholo, ukuqonda ingqiqo emva kweemeko zethu, kwaye sizinike ixesha kunye nendawo yokucinga ngokwethu, ngaphandle kokungena kwabanye.
Imiba enzima ye-Mercury iya kukhokelela ekulahlekelweni kokulinganisela phakathi kwezi zimbini zigqithisekileyo, apho umntu uya kuba ngumthwalo wentetho eninzi yabanye, okanye athwalise abanye ngamagama amaninzi awela umda wobudlelwane. Nokuba imeko ithini na, akukho sicombululo nakwesiphi na isiphelo sale specter xa umbindi ufuna ukufunyanwa. Unxibelelwano kubo bonke ububanzi bayo, emva koko, indlela yethu yokuchukumisa abanye ukusuka entloko ukuya ezinzwaneni. Nangona eyona ngxaki iphambili yeMercury yile inayo Jupiter , apha siza kubona ukuba ukungabikho kwangempela kokulinganisela kuvela kukungalingani kwethu Umhlaza - Capricorn kwi-axis kunye nakwiindima ezixhasayo okanye ezicela umngeni zethu Inyanga kwaye ISaturn . Ngokuxhomekeke kumandla kunye nempembelelo yomntu ngamnye, siya kuphethukela kwingqiqo yokuvakalisa iimvakalelo zethu ngelixa sisilela ukuthabatha uxanduva olupheleleyo lwezinto esizithethayo, okanye siphendukele ekuthuleni xa iintliziyo zethu zityunyuziwe, ukwenza umda kunye nocingo olubingelele. yenzelwe ukukhusela intliziyo yethu eyenzakeleyo.
Iqhinga apha kukwamkela ukuba akukho khetho lungalunganga phakathi kwezi zimbini. Umntu uya kulandela omnye ukondla umnqweno othile kwaye ahambe nempembelelo yoMphefumlo nangayiphi na indlela. Ekuphela kwento elungileyo esinokuyenza kukwamkela nokwamkela le mfuno yangaphakathi esiyithweleyo. Umntu ngamnye okhulileyo unoxanduva lokumamela abanye kwaye angawahluthi amandla abo ngokuthetha, kanye njengokuba sonke sinoxanduva lokuzikhusela kwabo bangabonakali beyeka ukuthetha. Ukudansa kumda wolu tshintsho, ukuzama ukufumana eyona nto ilungileyo kuphosakele, kuba bobabini kufuneka bathandwe kwaye baxatyiswe njengoko bethetha ngeesuti zethu ezinamandla, kanye njengoko bethetha ngobuthathaka bethu.
Xa Amazwi Ebaleka
Eyona ndima yeMercury kukwabelana ngolwazi. Kungakhathaliseki ukuba kuhle okanye kubi, kusebenza injongo, kwaye kulapho ungquzulwano oluphambili lweMercury kunye neJupiter kwihlabathi lethu lomntu luvela khona. Igama ngalinye linenjongo, kungakhathaliseki ukuba livela kwisiseko sokwazi kwethu, ukugxila kunye neziko, okanye ukusuka emthunzini wethu apho amandla abanye (kunye nathi) achithwa. Ulwazi lokwenyani alukho ngaphakathi kumandla obulumko bamagama njengalowo weemvakalelo. Indlela esisabela ngayo xa abanye bethetha, kunye nenkululeko yethu yokuthetha ngaphandle kweentloni, ngokusisiseko iya kunxulunyaniswa nemvakalelo kunokuba sinxibelelane nayo nayiphi na ingcamango ethile esinokusabelana ngayo okanye siyiphulaphule. Amazwi enzelwe ukondla iintliziyo zethu kwaye aya kwenjenjalo, kungakhathaliseki ukuba sondla ngamakhowa anetyhefu okanye iimvakalelo zothando nezinobubele. Ngokufanayo, senzelwe ukuzikhusela kwiimvakalelo ezimbi zabanye abantu, ngakumbi ukuba abanyanisekanga kwaye babonakala benobubele ngelixa intliziyo yethu ikhala ngokunyaniseka kwaye sizama ukumamela ingqondo yethu.
Xa kuziwa ekuziphatheni nasekunxibelelaneni, iMercury inendima ekhethekileyo yokuyichukumisa, njengoko iba yimvakalelo ngokwayo. Ngokuhambelana phakathi kwengqondo nentliziyo yethu, umsebenzi wayo uxabiseke ngendlela emangalisayo, kodwa yehla kwinto yokuba igama lilingana neemvakalelo, kwihlabathi ngalinye lobuqu nakuMphefumlo ngamnye. Nangona ingqondo ikhusela intliziyo, intliziyo inika ulwazi lokwenene, kwaye ligunya lokuqala lokumamela kulo naluphi na unxibelelwano. Esikhundleni sokuzikrazula phakathi koxanduva lweSiqu kunye noxanduva kwabanye, kufuneka siqale sisuse imithwalo kwaye sibone indlela esinokuzithanda ngayo ngakumbi, kungakhathaliseki ukuba ingxaki yethu yonxibelelwano. Apha kulapho kudaleka khona indawo yoxanduva lokwenene lokukhaba, xa sikhululwe kubutyala obungazange bume ithuba lokusombulula ingxaki yethu. Injongo yethu ayisuswa kungakhathaliseki ukuba sithetha ntoni na okanye singathethi, kanye njengokuba uxanduva lwethu luhlala lukhona xa silungile.
Umhlaza Emanzini Virgo Khetha Uphawu Pisces